Hadii Argentina Ay Koobka Aduunka Ugu Cad-cad Dahay & Moradona Oo 2 Arin Oo Cajiib Ah Kula Taliyay Messi %
Lionel Messi ma ahan inuu ku fikiro inuu cadeeyo waxa uu yahay iyo inuu ku guuleysto Koobka Aduunka ee 2018, kaasoo wadanka Ruushka ka dhacaya, waxaa sida aaminsan Halyeeygii hore ee Napoli, wiilka lagu magacaabo Diego Maradona.
Maradona ayaa wuxuu qabaa in Leo Messi, kaliya ay muhiim utahay inuu xooga saaro sidii uu raaxo badan ugu dareemi lahaa inta uu garoonka jiro iyo waliba mudada uu socdo koobka aduunka ee cariga Ruushka ka dhacaya.
Sidoo kale, laacibkii hore ee naadiga Napoli ayaa wuxuu aaminsan yahay in wadankiisa Argentna uusan ahayn midka ugu cad-cad inuu ku guuleysto koobka aduunka, waayo ayuu leeyahay kuwa ugu cad-cad waxba ma qaadaan.
“Waan ogahay inaan haysano ciyaaryahano badan, kuwaasoo dalkooda siin doona wax walba si uu koobka aduunka uqaado, laakiin hada ma dhihi karo waa midka ugu cad cad, sababtoo ah kuwa ugu cad-cad waxba ma qaadaan,” ayuu yiri Maradona.
“Laakiin waxaan qirayaa inaan haysano fursad aan ku qaadi karno koobka aduunka,” ayuu hadalkiisa kusii daray Maradona.
“Inuu joogteeyo dheelista iyo inuu ku raaxeyso kubada,” ayuu ku jawaabay Maradona mar la weydiiyay talada uu siinayo Leo Messi.
“Waxaan usheegay in uusan marnaba dhag-jalaq usiinin dhaleeceymaha u imaanaya isaga,” ayuu sii daba dhigay.
“Waxba in uusan caddeyn, in uusan ku fikirin qaadista Koobka aduunka, xitaa Champions League ama Copa del Rey,” ayuu ku daray hadalkiisa.
“Kaliya wuxuu hadda ubaahan yahay inuu ku raaxaysto garoonka,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Diego Maradona.
Xidiga Atletico Ee Koke Oo Ka Hadlay Inuu Griezmann Tagayo Iyo Midka Dunida Ugu Fiican Messi & Ronaldo